भोट हाल्ने दिन कस्तो होला मौसम ? « Loktantrapost
भोट हाल्ने दिन कस्तो होला मौसम ?
२० जेष्ठ २०७४, शनिबार २३:२२
सेटेलाइट रिपोर्ट भन्छ–‘हावाहुरीसहित मुसलधारे वर्षा हुन्छ ।’
पात्रो हेर्दै ज्योतिष भन्छन्–‘प्रचण्ड गर्मी हुन्छ, पानी पर्दैन ।’
झापा । असार १४ गते बुधवार । प्रदेश नं. १ लगायतमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव हुने दिन । मध्य असारको त्यो दिन मौसम कस्तो रहला ? सबैको चासो छ ।
नेपालमा मौसमको पूर्वानुमान गर्ने सरकारी निकायले चुनाव जस्तो त्यति धेरै महत्वका दिन कस्तो मौसमी वातावरण होला भन्ने विषयमा आम नागरिकलाई अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने हो । तर हाम्रो मुलुकका सरकारी निकायहरु त्यति जवाफदेही कहिल्यै भएका छैनन् ।
सर्वसाधारणहरु रेडियो सुनेर वा पात्रो हेरेर मौसमी अवस्थाको जानकारी लिने गर्दछन् । महत्वपूर्ण मुहुर्तका बेला कस्तो मौसम होला भनी आधिकारिक खोजीनीति गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन ।
लोकतन्त्र पोस्टले यही विषयमा केन्द्रित रहेर मौसम पूर्वानुमानका बैज्ञानिक र शास्त्रीय विधिका आधारमा केही तथ्यहरु सङ्कलन गरेको छ । जसले चुनावका दिन कस्तो मौसम होला भन्ने हाम्रा पाठकहरुको जिज्ञासा अवश्य मेट्ने छ ।
वैज्ञानिक भन्छन्–विहानैदेखि मुसलधारे वर्षा ः
भूउपग्रह (सेटेलाइट)मार्फत मौसमको पूर्वानुमान प्रकाशित गर्दै आएको एक्कुवेदर डटकमका अनुसार असार १४ गते बुधवार (२८ जुन, २०१७)का दिन विहानैदेखि झापामा मुसलधारे वर्षा हुने छ ।
विहान आकाश गर्जिनेछ र कतै कतै चट्याङ पनि पर्ने सम्भावना छ । त्यो मितिका दिन दिउँसो ४ मिलिलिटर र राति ८ मिलिलिटर वर्षा हुने सम्भावना छ ।
एक्कुवेदरले जारी गरेको मौसमी प्रक्षेपण अनुसार त्यो दिन अधिकतम् तापक्रम ३१ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम २३ डिग्री हुने छ । साँझपख हावाहुरी समेत आउन सक्ने सो माध्यमले जनाएको छ ।
मतगणनाका दिन ः
असार १४ गते मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि बर्षाको मौसम भएकाले विभिन्न बुथबाट मतपेटिका सङ्कलन हुन केही ढिलो हुन सक्छ । पहाडी भूभागमा अझ पहिरो वा बर्षाले निकै कठिनाई उत्पन्न नगर्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ अधिकाँंश नगर तथा गाउँपालिकामा भोलिपल्ट अर्थात असार १५ गते विहीवार मात्र मतगणना सुरु हुन सक्छ ।
एक्कुवेदरका अनुसार असार १५ गते विहीवारका दिन झन् भीषण वर्षा र हावाहुरी आउन सक्ने सम्भावना छ । दिउँसो २७ मिलिलिटर र राति ९ मिलिलिटरसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ । दिउँसो कम्तीमा ७ घण्टा र राति ५ घण्टा वर्षा हुने प्रक्षेपणमा जनाइएको छ ।
मतदानको अघिल्लो दिन अर्थात असार १३ गते मङ्गलवार पनि वर्षाकै सम्भावना देखाइएको छ । सो मिडियाका अनुसार असार १३ गते दिउँसो ७ घण्टा र राति ६ घण्टासम्म लगातार वर्षा हुने सम्भावना छ । वर्षाको मापन चाहिँ दिउँसो ९ मिलिमिटर र राति १२ मिलिमिटर हुने जनाइएको छ ।
ज्योतिषी भन्छन्–वर्षाको योग छैन ः
पञ्चाङ्ग समितिले प्रकाशित गरेको आधिकारिक पात्रोलाई उद्धृत गर्दै ज्योतिषाचार्य निरोज खनाल असार १४ गते मतदानका दिन झापा लगायत पूर्वी नेपालमा वर्षाको योग नभएको बताउँछन् ।
‘पश्चिम नेपालतिर वर्षा हुनेछ, तर पूर्वमा त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन’, मौसमी पूर्वानुमान सुनाउँदै खनाल भन्छन्–‘पात्रोमा स्पष्टसँग भनिएको छ, त्यो दिन कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउँदैन ।’
उनले सरकारले चुनावको तिथि तोक्दा पञ्चाङ्ग विज्ञहरुसँग परामर्श नै गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यो दिन प्रचण्ड गर्मी भने हुने अनुमान गरेका छन् ।
तर चुनावको अघिल्लो दिन असार १३ गते र चुनावको भोलिपल्ट असार १५ गते भीषण वर्षाको योग भएको उनले जनाए ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति नआउने तर झगडा, चोरी, डकैती, अपहरण, लुटपाट जस्ता घटना भने हुन सक्ने योग रहेको ज्योतिषाचार्य खनालको भनाई छ ।
ज्योतिषाचार्य निरोज खनाल
पूर्वमा सूर्य, मध्यमा राहु केतु र पश्चिममा वृहस्पति ग्रहको प्रभाव देखिने भएकाले परिणाम पनि ग्रहदशा बमोजिमकै हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार पूर्वमा बढी शान्ति, मध्यमा उपद्रो र पश्चिममा हलुका गडबढी हुने योग देखिएको छ ।
कसको कुरा पत्याउने ?
नेपाली समाजमा खगोल विज्ञानका आधारमा निर्माण गरिएको पात्रोमा गरिएको भविष्यवाणी माथि निकै विश्वास गर्ने चलन छ ।
साइत हेर्दा पात्रोकै प्रयोग हुने गर्दछ । मानिसहरु यही आधारमा लेखिने राशीफलमा पनि निकै विश्वास गर्दछन् । नेपाली पञ्चाङ्गमा यसवर्षको जेठ महिनामा ‘मोटर गाडी र वायुयान दुर्घटना जस्ता घटना घट्ने’ अनुमान उल्लेख थियो । साँच्चि नै जेठ महिनामा भयावह प्लेन दुर्घटनाका खबर सुन्नु पर्यो ।
वैज्ञानिकहरुले अन्तरीक्षमा स्थापना गरेको भूउपग्रहले खिच्ने तस्वीर, वायु गति र वादलको वहावका आधारमा मौसमी भविष्यवाणी गर्दैै आएका छन् ।
विदेशतिर मौसमी खबर सुनेर यात्रामा निस्कदा छाता बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने निर्णय गर्ने गरिन्छ । तर हामीकहाँ सरकारी निकायले गर्दै आएको मौसमी भविष्यवाणी नमिल्दा विज्ञानप्रति समेत कहिलेकाहिँ अविश्वास सिर्जना हुने गरेको छ ।
कसलाई पत्याउने भन्ने विषयमा अहिल्यै भविष्यवाणी गर्ने भिन्नै आधार लोकतन्त्र पोस्टसँग छैन । किनकि, दुबै पूर्वानुमान केही न केही विधिका आधारमा भएका हुन् । अनुमान सही कि गलत हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चुनावकै दिन मात्र थाहा हुने छ ।
को हुन् ज्योतिषाचार्य खनाल ?
ज्योतिषाचार्य निरोज खनाल मेचीनगर–१५ स्थित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य हुन् । उनी नियमित रुपमा लोकतन्त्र पोस्टमा राशीफल लेख्छन् ।
उनी वास्तुशास्त्र र ज्योतिष शास्त्रका विद्वान मानिन्छन् । इलाम फुयतप्पा घर भएका उनलाई गुरुकुल स्थापनापछि अर्जुनधारा जलेश्वर धामका व्यासाचार्य पुष्पलाल निरौलाले प्राचार्य नियुक्त गरेका हुन् ।
के हो एक्कुवेदर ?
एक्कुवेदर डटकम एउटा फरक धारको न्यूज पोर्टल वेबसाइट हो । यसले मौसम सम्बन्धी संसारभरको जानकारी दिने गर्दछ ।
उसको साइटमा जनाइए अनुसार एक्कुवेदरको मौसमी पूर्वानुमान सेटेलाइट रिपोर्टका आधारमा हुन्छ ।